हलिवुड मनोविज्ञान समीक्षा | अनलाइन मानसिक पठन
अनलाइन मानसिक रीडिंग > हलिउड मनोविज्ञान समीक्षा
हलिउड मनोविज्ञान हाइलाइट्स
उत्कृष्ट परिचयन प्रस्ताव: 1 मिनेट सम्मका लागि पहिलो तीन मिनेट निःशुल्क र $ 30 प्रति मिनेट
यदि तपाईं "सन्तुष्ट भएन भने सबै भन्दा राम्रो रिटर्न नीति हो" को फिर्ती रकम फिर्ता वा क्रेडिट को विकल्प प्रदान गर्दछ
"प्रायः फ्लायर" प्रकार कार्यक्रम: नियमित ग्राहकहरूले बोनस मिनेट कमाउँछन्
सबै मनोचिकित्सकहरूले सफलतापूर्वक कामदारको साथ दुई नमूना पढाईको साथ सफलतापूर्वक प्रदर्शन गर्नु पर्छ
फोन कुराकानी र अनलाइन च्याट उपलब्ध छ
लेखहरु को एक धन तपाईंको अनुहार मा उपलब्ध शैक्षणिक विषयों को एक किस्म
सल्लाह दिएर विशेषज्ञ र दृष्टिकोणद्वारा सल्लाहकारहरू
फोन 24 /7मार्फत प्रत्यक्ष ग्राहक सेवामा बोल्नुहोस्
वेबक्याम मार्फत सेवाहरू यस समयमा उपलब्ध छैन
प्रारम्भिक प्रस्ताव समाप्त भएपछि, सबै मानसिक दर $5प्रति मिनेट हो, जुन त्यहाँ सबै भन्दा सस्तो छैन
यो समयमा नै मानसिक रीडिंग उपलब्ध छैन
हलिउड मनोविज्ञान अन्य कुनै पनि साइटहरु जस्तै जस्तै कुनै पनि मानसिक वा टैरो पाठक जुन पसल खोल्न चाहँदैनन्। जो कि यस कम्पनीको लागि काम गर्न चाहानुहुन्छ अनुप्रयोग भर्नु पर्छ, त्यसपछि एक कर्मचारी सदस्य द्वारा दुई नमूना पढाईहरू पास गर्नुहोस्। त्यसपछि मात्र तिनीहरू कम्पनीको ग्राहकहरूको लागि मानसिक सेवा र टैरो पढाइहरू प्रदान गर्न बोर्डमा आउन सक्छन्।
किनकी तिनीहरू केहि अन्य साइटहरु को रूप मा लामो समय सम्म व्यापार मा नहीं रहे हो र उनि अधिक चुनिंदा प्रयास गर्ने प्रयास करते हो जो कि उनि किराया छन्, तपाईं अन्य साइटहरु को रूप मा एक ठूलो चयन को रूप मा पूल को रूप मा नहीं पा सकते हो। तर मात्रामा गुणस्तर, दायाँ?
एक विश्वसनीय र सही मानसिक छनौट
प्रत्येक सम्भावना अघि प्रत्येक संभावित सल्लाहकार परीक्षण गरिएको छ हलिउड मनोवैज्ञानिक, त्यसैले तपाईँले तिनीहरूको बहुविध मापदण्ड फिल्टरिंग प्रणालीको प्रयोग गरेर सर्वश्रेष्ठ फिट छनौट गर्न पर्छ। टेरो कार्ड वा ज्योतिष जस्ता पढ्ने उपकरणहरूद्वारा तपाइँको चयनलाई तान्नुहोस्। के तपाईं एक माध्यम, समानुपातिक वा एक जना पनि मनोवैज्ञानिक पालतू जनावर खोज्दै हुनुहुन्छ? समस्या छैन। केवल आफ्ना परिणामहरू फिल्टर गर्नुहोस्। केही सल्लाहकारहरूले विशेष मुद्दाहरू जस्तै सम्बन्धका मुद्दाहरू वा क्यारियर र फाइनान्सहरूमा पनि विशेषज्ञ बनाउँछन्। हलिवुड मनोविज्ञान 'उच्च तहको परीक्षण भनेको हामीले सर्वश्रेष्ठ मानसिक पढाइ बजारमा देखेका छौं।
तपाईं आफ्नो परिचयात्मक छूट को रूप मा केवल $ 30 प्रति मिनेट को लागि समय कुरा को 1 मिनेट सम्म खरीद सकते हो, जो कुनै पनि मानसिक पढाई साइट को सबै भन्दा उदार प्रस्तावहरु मध्ये एक छ। धेरै अन्य तुलनात्मक परिचयात्मक मूल्य प्रदान गर्दछ, सामान्यतया केहि कम से कम मिनेट मा तपाईं कम दर मा खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको प्रारम्भिक छूट पछि, पढ्ने दर $5प्रति मिनेट हो। हलिउड मनोविज्ञान एक सदस्यता प्रोत्साहन कार्यक्रम पनि प्रदान गर्दछ, जसलाई सदस्यता पेक्स भनिन्छ। कम्तीमा 10 मिनेटको प्रत्येक 10 पढाइको लागि, तपाइँले प्रतिमा 15 निःशुल्क मिनेट सम्ममा5नि: शुल्क बोनस मिनेटहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ।
तपाईं फोन द्वारा मानसिक रीडिंग्स को चयन गर्न सक्छन्, वा यदि तपाईं अधिक विचारधारा केहि खोज्दै हुनुहुन्छ भने एक सल्लाहकार संग अनलाइन च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। हलिउड मनोविज्ञान हाल वेबक्याम च्याट प्रदान गर्दैन, जुन थप प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत सम्पर्कको लागि अनुमति दिइनेछ। तिनीहरू पनि मानसिक रीडिंग ईमेल प्रदान गर्दैनन्। यद्यपि, इमेल रिडिङहरू धेरै उपलब्ध नहुन सक्छ जुन प्रतिक्रिया प्रस्ताव गर्न वा कुनै अन्य ईमेल सत्र खरिद नगरी पछ्याउने प्रश्नहरू सोध्न सक्षम छन्।
मानसिक प्रोफाईलहरूसँग मानसिक पाठकहरूका अडियो रेकर्डिङहरू छन्, त्यसोभए तपाईं एक सल्लाह खरीद गर्नु अघि एक सल्लाहकार पूर्वावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाई असामान्य हुनुहुन्छ भने अन्य सम्भावित सेवाहरूले तपाईको खातामा क्रेडिट प्रदान गर्दछ, तर हलिउड मनोविज्ञान यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने वास्तवमा तपाईंको पैसा फिर्ता गर्नेछु। फिर्ती प्राप्त गर्नका लागि तपाईंले केही दिशानिर्देशहरू पूरा गर्नु पर्छ, जस्तै कि पढाइको एक दिन भित्र ग्राहक सेवालाई सम्पर्क गर्न। यो तपाईंको सबैभन्दा भर्खरै भुक्तान गरिएको पढाइको लागि पनि हुनुपर्छ, किनकि तिनीहरूले नि: शुल्क पढ्नको लागि तपाईंलाई फिर्ता गर्न सक्दैनन्।
यदि तपाईं आफ्नो पहिलो पढाइको एक साथ असफलता हुनुहुन्छ भने, खातालाई क्रेडिट ले अर्को मानसिक प्रयास गर्न विचार गर्नुहोस्। कहिलेकाँही मनोविज्ञान र टैरो पाठकहरू पहिलो पटक जडान गर्न असफल भए। यस्तो उत्कृष्ट ग्यारेन्टीको साथ, पछि पछि नगद फिर्ताको लागि जाँदा कुनै हानि छैन।
हलिउड मनोविज्ञान तपाईंको परिचयात्मक छूटको म्याद पछि मनोवैज्ञानिक मूल्यहरु लाई अधिक कुलीन चयन प्रदान गर्दछ, तर तिनीहरू तपाईंलाई प्रति मिनेट $ 1 मा सेवा प्रयास गर्न मिनेटको उदार आपूर्ति दिन दिन्छन्। र यदि तपाईं खुशी हुनुहुन्न भने, तपाइँ लाई मजबुर हुनुहुन्न क्रेडिट प्राप्त गर्नुहोस्, तर तपाईंको पैसा फिर्ता प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यहाँ प्रायः कुनै जोखिम समावेश छैन।
हलिउड मनोविज्ञान अन्य कुनै पनि साइटहरू जस्तै जस्तै कुनै पनि मानसिक वा टैरो पाठक जुन पसल खोल्न चाहँदैनन्। जो कि यस कम्पनीको लागि काम गर्न चाहानुहुन्छ अनुप्रयोग भर्नु पर्छ, त्यसपछि एक कर्मचारी सदस्य द्वारा दुई नमूना पढाईहरू पास गर्नुहोस्।